Killeen Bofaa summii Bofaa Irraa Qulqulluu Tahuu Hin Danda’u « QEERROO
Killeen Bofaa summii Bofaa Irraa Qulqulluu Tahuu Hin Danda’u
November 8, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Namni killee bofaa utuu summii qabaachuu isaa beekuu nyaachuu filatu nama garaa isaaf jecha lubbuu isaa dabrsee laate duwwaa dha. Du’aatiin namoota akkasii mararsiifanaa hin qabu. Summii sanan dararmee du’uu mana harkaan funyoon morma of hudhee of ajjesuu wayya.
OPDOn akka ijaarsaatti killee bofaa uummata Oromoo summiin fixxuuf diinni uummata Ormoo ijaarate tahuu daqiiqaa tokkoof illee dagachuu hin qabnu. Akka ijaarsatti kaayyon OPDO meeshaa garboofanna diinni uummata keenya ittiin gargaaramuuf qopheefatee jiru akka tahe eeynu jalaa iyyuu dhokkataa miti. Uummatni Oromoo waggaa 26 darban kana utuu tuhannaa fi bulchinsa OPDO jala jiru kummataan ajjeefamuun, hidhamuun biyya abbaa isaa ariihamuu hiree taheef jira. Haalli kun hammaachaa dhufee Oromiyaa keessatti manaa bahanii nagaan mana itti deebi’uun yaaddoo guddaa tahee jira.
Yaroo Kibaa amma Kabaa , Bahaa amma Dhihaa uummatni keenya waloon rasaasa Agazziin akkaamaa jiru OPDOn uummata keenya nutu itti gaafatamaqaba; hin ajjeessinaa jechuu illee gooftota ishee yoo sodaate maaloo ijoollee daai’ma illee hin ajjeessina jettee dubbachuuf fedhis, humnas hin qabdu. Maatii fi uummata ijoolleen irraa dhumaa jiraniin isin wajjin gaddaa jirra jettee jajjabeessuuf illee onnee hin qabdu.
OPDOn qodaa cabe kan TPLF olii fi gad gagalaglshitee itti dhima bahaa jirtu. Kan ijoollee Oromoo fixaa turee fi har’as kan ficcisiisaa jiru warruma kunoo har’a waaluu haaraa ufatanii afaa dama godhanii uummata keenya burjaajeessuuf olii fi gad kaachaa jiru kana. Dhiyeenya kana Amboo irratti waraanni Agaazzii ijoollee harka qullaa jirtu akka rasaasan akkaa’uuf warri itti waamee maqaa OPDOn warra biyyaa bulchaa jirra jedhan kana heeraa fi seeraa biyya lafaa duratti wal qixxa akka dhiyyaatan gadi fageessinee irratti hojjechuu qabna. Ilmaan keenya akka hoolaa faasikaa kan du’aa qopheessaa jiru OPDO dha. OPDO amannee duukaa kaachuun akkuma nama killeen bofaa summii qabaachuu utuu beeknu nyaachuu taha. Yoo utuu beeknuu duukaa fignee dhumne dhumaatii nu irra gahuuf itti gaafatama qabna.
Ijaarsa OPDO keessa saba boontonni Oromoo akka jiran mamiin hin jiru. Saba boontonni OPDO keessa jiranis akkuma keenyaa ajjeessamuu, waxxalamuu, mana hidhaa keessatti torturuu fi hojii irraa arihaamuun isaan mudachaa jira. Warri ijaarsa OPDO keessatti ol aantumaa qaban diina wajjin wal tahanii qabeenya uummata keenyaa saamuu fi saamsisu, ilmaan Oromoo ajjeessuu fi ajjeessuun caalaa guddachuuf wixxifachaa jiru. Har’a yaroo qabsoon bilisummaa Saba Oromoo bilbillee diina isaa raatesaa jiru ayyaan ilaalatonni OPDO qabsoo bilisummaa saba keenyaa yoo danda’an dhaamsuuf yoo dadhaban booresanii akka gara darbu gochuuf halkanii fi guyyaa itti jiru. Tooftaan jiru araba damma godhanii sagalee uummatni dubbatuu ergifatanii gara qabsoo keenyatti waan makaman of fakkeessanii qabsoo bilisummaa kana uummata harkaa butuuf itti agaamaa jiru. Shirri xaxxamaa jiru bifa danuu waan qabuuf dammaqnee eegachuu qabna.
Kana dura ABO diina uummataa akka taheetti balaalefachaa turan. Namoota leenjisaa akka ABO keessa hulluqanii galanii diiganii ykn hoonkoraa uummuun, akka ABO fi Uummata dugdaa fi garaa walitti tahan gochuuf dabballee hedduu facaasanii jiru. Warri kun akkuma OPDO qajeelfama kan argatan TPLF irra akka waan ifa jiru. Diinni isaanii inni duraa ABO ti. Akka isaan yaadan itti yoo ABO fi WBOn bade rakkinni uummata Oromoo ni raawwata. ABO balleessu yoo hin dandeenye illee hin jiruu jedhanii haaluun waan uummata Oromoo abdii gutachiisu itti fakkaatee kara nama Oromoo tahanii akka ololamu godhu. Gaafa duraa Jawar Mohammed ABO hin jiru jedhee barreessan facaasee xinxaltoota media warra Habashaatti tahe. Namni kun nama waan baayyee beeku of fakkeessuuf yaroo dubbatu baayyee waca. Warra Habashaa wajjin wal dhabee yaroo isaan biyyaa Amerikaa keessaa isa ariisisuu irratti boba’an namni Oromoo itti dirmata warra Habashaa harkaa baasee horii gummaachuun akka OMN dhaabbatu gargaare.
Inni garuu alaaba ABO of duuba ka’ee qabsoo uummata Oromoo bacancarsuu fi ABO dadhabsiisuu hojii isaa duraa godhee fudhate. Oromoota saboonummaa qabaatan OMN keessaa tokko lamaan haxxawee baase. Hunda irra iyyuu darbee OMN media OPDO fi TPLF gochuu danda’e jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo wareegama hiriyyaa hin qabne baasuudhaan waggaa kudha lamaaf dhiiga isaanii dhangalaasaanii qabsoo bilisummaa Oromoo har’a OPDOn illee irraa butachuu akka corofee olii fi gad kaachaa jirtu kan asiin gahaan qaanii tokko malee waggaa lamatti gadi xiqqeessee jira. Waan media kana of harkaa qabuuf nama hanga tokko burjaajeessuun hooggansa qabsoo bilisumma Oromoo kana Qeerroo BIlisummna Oromoo harkaa baasee OPDO gonfachiisuuf akka tattaafafachaa jiru ifatti agarra. Haatuu fi sobduun booda natti akkuma jedhamu ololli kamuu dhugaa dhoksuu malee owwaaluu hin danda’u
Akkuma kana dhiyyeenya kan namni Gabremasqal jedhamu OMN Jawar kana irratti ABO hin jiru jedhee dubbachuu isaa dhaga’anii namootni baayyeen gaddu. Namni kun yookaa gantata ykn nama sammuun raataww tahuu qaba. Har’a uummata Oromoof qofa utuu hin taane saboota waanjoo garbummaa Impayeera Itopiyaa jala jiraniifuu abdiin jiru ABO dha.Biyyi lafaa hunduu ABO ni beeka. Bona darbe kana imaltoonni (peoples reprentativevs) dhiba shanii ol tahan kan irraa qooda fudhatan Kura Sabaa 4ffaa akka nagaan xummurate firaa fi diinaaf ABOn addsee jira. Eeyyee media OPDO kan tahe OMN irraa kan hafe hunduu waa’ee kora kanaa gabaasanii jiru. Namni kunii qaama OPDO warra tahan warri maqaa activistootaa Oromoon wacabarraa jiranii fi warra nama sadii illee ijaarsa godhanii fudhatn keessa tokko dha. Ijifannoon ABO galmeesse inni duraa fi inni guddaan Kaayyoo Bilisummaa uummata Oromoo fudhachiisu dha. Waraagmni ilmaan Oromoo wagaa afurtamaa ol dhiiga isaanii itti lolaasanii fi lafee isaanii itti tareesan arsaan isaanii deebii argatee kaayyoon isaanii kufaniif uummata isanii qaqqabeef jira. Lolli bilisummaa hojii uummata bal’aati malee hojii namoota muraasaa miti. Kana booda kan bilisummaa isaaf lolatee of bilisoomsuu qabu uummata Oromoo ti.
Diinni Oromoo kan duraa TPLF fi lukkeen ishee qabsoo uummata Oromoo gara dabrsuuf shirri hedduutu dalagamee, ammas dalagamaa jira. Yoo tokko kufu tokkotti darbamu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi uummatni Oromoo waan OPDO deemuuf yoo tolee jedhee fudhatee nagaan qabsoon bakka yaadame ni gaha jedhanii uummata dogongorsuuf kijibni bitaa fi mirgaan oofamaa jira. Basaastonni OPDO fi TPLF alaabaa ABO qabatee kan deemu basaasa jechuudhaan akka alaaba ABO qabachuun yaadoo fidu gochuuf yaalamaa jira. Sabootaa fi Sab-lammii uummata Oromoo irratti kaasuunis waan gargaaraa jiru hin fakkaatu. Hiriira uummatni Oromoo gochaa jiru kan waame TPLF. Yaadni isaanii Uummatni Oromoo sodaachisanii si achi hiriira Qeerroon BIlisummaa Oromoo waamu irratti akka hin argamne dhorkuuf. TPLF fonqolcha OPDO irratti gochuuf yaadaa jirti jedhamee kan odeesisamaa jirus dhugaa irraa fagoo jira. Akka Uummatni Oromoo OPDO amane ammatu gochuuf malee OPDOn yoo TPLF mataatti baatee hin deemne guyyaa tokko iyyuu buluu hin dandeessu. TPLF yaroo barbaadu Finfinnee keessaa badaa , yaroo barbaadu amma kana kootaa jettee akka horii kan olii fi gadi ooftu akka taate namni walaale hin jiru. Hara’a gammee sadan TPLF baatee jiru keessa uummatni Oromoo fi Amaaraa waan hundee ishee tolchoosee raaseef OPDO fi ANDM akka uummata isaanii ukkamsanii walitti suphaa jirti.
Obbo Lammaa Magarsaa yoo tahe nama akka gaarerraa kan arge fakkaatuu fi hafaan dama godhee jiraatu malee nama waan dubbatu hojiin agrsiisu akka hin taane argaa jirra. Yaroo gabaabaa kana keessatti dabbalee hedduu horatee jira. Warra dhiiga ilmaan Oromoo dangala’aa jiruuf dimmaa hin qabane Obbo Lamma kana yaroo farsan dhageenya. Duris farri qabsoo bilisumma Saba Oromoo orma caalaa namoota Oromoo ayyaan ilaalatoota tahan akka tahee seenaan saba keenyaa mirkana.
Dhugaan lafa jiru qabsoon uummata Oromoo OPDO bilisa baasuu ni danda’a. Yoo qabsoon keenya TPLFiin barbadeesse OPDO dhaaba walabummaa qabu ni godha. Kanaafuu OPDO tu uummata Oromoo bilisa baasa utuu hin taane qabsoo bilisummaa uummata Oromootu OPDO bilisa baasuuf deema. Namooni ijaarsa OPDO keessa jiran meeshaa waraanaa fi qabeenya diinaa saamuu danda’an fudhatanii gara qasootti makkamauun akka qabsoon saba keenya mirgisu gochuu danda’u. Lubbuu diina keenyaas ni gabaabsa. Yoo har’as TPLF rasamaa jirtu kana wajjin dhaabatnii kan deebisanii ishee jajjabeessan tahe isaaniis uummata Oromoo wajjin xofoo garbummaa habuuqachuuf jiraatu. Waliin qabsoofnee diina nama nyaatu kana of irraa kaasuu malee nagaan jiraachuuf filmaata biraa hin qabnu.
Gadan Gadaa bilisummaa ti1
« SBO Sadaasa 8,2017. Oduu, Yaadannoo Guyyaa FDG waggaa 12ffaa ilaalchisuun Ijoo Dubbii ABO, Guyyuma kana ilaalchisuun Marii dargaggoo Lammii Beenyaa waliin taasifame kuxaa xumuraa fi Qophii SBO sagantaa Afaan Amaaraa.
Godina Arsii Keessatti Imaan Oromoo FXG Bara 2016 Irratti Wayyaaneen Manneen Hidhaatti Guure Hanga Har’aa Murtii Malee Jiranii. »
Pingback: Killeen-Bofaa summii Bofaa Irraa Qulqulluu Tahuu Hin Danda’u – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA
Sagantaan keessaan uummataaf deegartoota biratti daran fudhatamaa ta’uun beekamaa ta’ee osoo jiruu …itti dogongorri qubee fknf omn ‘opdo kan jedhu kunneen itti dhimmamaan gabaasaa jirachuu/guulaaluu dhabuu keessan kanaaf daran itti dhimmamuufi wal sirreessuun, waldhagayuun injifannoof nu geessa
Ni tura malee hinuma hurra
Ijnifannoon kan uummata oromooti!